Furan Meherad: Blogging Corporate | Martech Zone
Sabtida, Maarso 12, 2011 Axad, Oktoobar 19, 2014 Douglas Karr
Subaxaan, waqti qurux badan ayaan ku qaatay Furan Ganacsiga raadiyaha show la Trey Pennington iyo Jay Handler, Hadal-yaqaanno dhammaystiran iyo la-taliyeyaal caawiya ganacsiyada ayaa u qaadaya heerka xiga. Mawduuca, dabcan, wuxuu ahaa Blogging Corporate!
Inta lagu jiro bandhiga, Dan Waldschmidt waxaan weydiiyay su'aalo cajiib ah oo aan doonayay inaan la wadaago madaama aanan faahfaahin aad u badan ka bixin karin bandhigga:
Mawduucu aad ayuu uga muhiimsan yahay tayeynta. Ogolahay? Maya? - Jawaab: Haa… laakiin. Sababta aan waqti badan ula qaato macaamiisha ku saabsan hagaajinta ayaa ah inaan hubiyo inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​waxyaabaha ay qorayaan. Ku habboonaynta raadintu waa muhiim maxaa yeelay waxay hubin doontaa in waxyaabaha laga heli doono makiinadaha raadinta. Kordhinta beddelka ayaa muhiim ah maxaa yeelay waxay siin doontaa waddo loogu talagalay akhristayaasha si ay uga gudbaan akhriska boostada oo ay u noqdaan macaamiil cusub. Mawduuc weyn doono guuleysto oo aad hesho natiijooyin; si kastaba ha noqotee, soo-kicinta weyn ayaa soo jiidan doonta oo u rogi doonta booqdayaal badan macaamiisha.
Maxay yihiin tilmaamaha 4-5 ee ugu sarreeya ee loogu talagalay bloggers? - Ha bilaabin ilaa aad ka hubto inaad ka go'antahay oo aad wax bixin doonto. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad leedahay mowduucyo qoris ah, waxaad u qortaa si isdaba joog ah, adiguna ha 'joojin. Kaliya dib ha u cusbooneysiin waxyaabaha suuqgeynta ah - ka jawaab su'aalaha rajooyinkaaga iyo macaamiishaadu daneeyaan oo ay wax ka weydiinayaan. Hubi kanaga loo diray galka wixii fikrado ah oo weyn. Hubso inaad haysato waddo aad si qoto dheer ula macaamilkaaga u la gasho - tani caadi ahaan waa wicitaan waxqabad ee dhinaca dhinaceeda oo tilmaamaya bogga soo degitaanka oo leh macluumaadka xiriirka ama taleefan lambar si aad ganacsi u sameyso. Ha uga tagin ku-habboonaynta raadintaada fursad - madal, mawduuc, iyo nuxur ahaanba dhammaantood waxay u baahan yihiin in la wanaajiyo si ay makiinadaha wax raadintu u muujiyaan waxa ku jira isla markaana aad ku soo booddo natiijooyinka raadinta ee mawduucyada la xiriira ganacsigaaga.
Sidee ku saabsan ka jawaabida su'aalaha ay ka baqayaan inay weydiiyaan? Taasi waa hogaaminta fikirka dhabta ah… Haa, waa sidaas oo way wadi doontaa maamulka. Dad aad u tiro badan ayaa qora boggooda internetka oo leh cod si fiican u xun. Muranka iyo daacadnimada ayaa wada hadalka wada oo akhristayaasha siin doonta xaqiiqo ah inaad labadiinuba daacad tihiin oo furfuran tihiin. Taas waxaa ka mid ah qorista qoraallo ku saabsan guul darrooyinkaaga iyo inta aad guuleysatoba. Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan la shaqeyno dadka dhabta ah waana ognahay inaan dhamaanteen halgan ugu jirno waqti ka waqti. Fahamka sida shirkaddaadu uga guuleysato fashilka waxay u horseedi kartaa rajo badan ganacsigaaga. Daacadnimadu waa nasteexo iyo mawduucyo adag ayaa dhaqaajin doona maamulka!
Daar ilaa Furan Ganacsi subax kasta Sabti 9AM EST. Mahadsanid Trey iyo Jay!
Tags: hagaajinta blogkobcinta waxyaabahailaaliyaha jayu furan ganacsigatrey pennington
Talooyin fiican. Waxay ahayd dhiirigelin markay maqasho inaad la wadaagto aqoontaada.
Waa wax laga xumaado sida yar ee "u helaan". Sii wad shaqada weyn.
Laga soo diray iPad-kayga